Way fudud si ay u gudbiyaan Xogta laga Old iPhone in New iPhone
Just cusboonaynta hore iPhone si iPhone 6 (Plus), oo kaliya si aad u ogaato in xogta aad u qiimo badan, oo ay ku jiraan xiriiro, music, video, sawiro iyo kuwo kale ay wali ku xayiran on jir iPhone? Ha welwelin. Waa a no-brainer in ay xogta ka iPhone wareejiyo iPhone. Waxaad ku samayn kartaa si fudud, adigoo isticmaalaya Lugood, iCloud ama qaar ka mid ah qalab xisbiga saddexaad.
Habka 1: Transfer Faylal ay ka Old iPhone in New iPhone 6 (Plus) la MobileTrans
Habka 2: Xogta laga Old iPhone dhaqaaq New iPhone 6 (Plus) la Lugood
Habka 3: Xogta laga iPhone Bedelka si iPhone 6 (Plus) la iCloud
Isbarbar ka mid ah MobileTrans, Lugood iyo iCloud
Habka 1: Faylal ay ka Old iPhone Bedelka in New iPhone 6 (Plus) 1 Click
Bedelka jir iPhone si iPhone 6 (Plus) 1 click!
Farriimo, xiriirada, sawiro iyo taariikheed ee ay kala soo wareegeen jir iPhone si iPhone 6 (Plus)
Audio Copy iyo video cusub iPhone 6 (Plus), iyadoo aan loo eegin in ay iibsadaan ama aan.
Ceshano gurmad Lugood iyo wareejiyo iPhone 6 (Plus) effortlessly.
Si fiican u shaqeeyaan iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS macruufka orodka 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. Run Wondershare MobileTrans ah
Ku rakib Wondershare MobileTrans ku on your computer. Connect aad iPhone iyo iPhone 6 jir (Plus) la your computer via 2 USB fiilooyinka. Ka dib markii socda barnaamijka, waxaad arki doontaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota.
In uu furmo suuqa ugu weyn, waxa aad ka arki kartaa Phone in Transfer Phone feature. Waxaa Riix oo aad arki doonaa suuqa kala hoose. Marka laga reebo wareejinta jir iPhone si iPhone 6 (Plus), software this sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad content wareejiyo ka iPhone 4 ilaa iPhone 5S, ka iPhone 4 ilaa iPhone 5, ka iPhone 5 ilaa iPhone 4, iyo in ka badan. Ilaa iyo inta aad laba iPhone waxaa taageera, waxaad isticmaali kartaa software si photos, music, video, jadwalka, fariimaha iyo xiriirada wareejiyo ka mid iPhone (macruufka 9 taageeray) in kale.
Tallaabada 3. Start iPhone hore si iPhone 6 (Plus) Transfer Data
Just bilaabi kala iibsiga xogta adigoo gujinaya Start Copy . In wada hadal pop-up ah, waxaad eegi kartaa horumarka kala iibsiga. Waxa aad qaadataa xoogaa daqiiqado ah. Marka way dhamaatay, xogta ku saabsan jir iPhone waxaa loo wareejin doonaa cusub iPhone.
Tallaabo 1: Ku rakib ka Lugood dambeeyay kombiyuutarka. Waxaa Launch.
Talaabada 2: Isticmaal ah USB cable Apple in ay ku xidhmaan hore iPhone in kombiyuutarka. Lugood waxaa lagu ogaan doonaa oo wuxuu muujinayaa hoos AALADAHA .
Talaabada 3: Guji magaca hore iPhone ayaa si ay u muujiyaan guddi gacanta ay xaq. Riix Back Up Hadda xogta gurmad aad jir iPhone.
Talaabada 4: Marka horumarka gurmad dhamaado, waa in aad barkinta hore iPhone. Markaas, xirmaan cusub iPhone.
Talaabada 5: In aad guddi cusub oo ay gacanta ku iPhone, guji Soo Celinta kaabta ... Dooro jir iPhone ee gurmad file oo u soo celiso cusub iPhone..
Haddii aad qotomisay aad iPhone cusub 6 (Plus) ka hor, waxaad u baahan tahay inay hesho Goobta> General> celi> masixi All content iyo Goobta. Markaas, guuleysatey ceshan iPhone (macruufka 9 taageeray). Ka dib markii in, raac tallaabooyinka hoose.
Talaabada 1: Daar network WiFi on hore iPhone.
Talaabada 2: Tag Settings > iCloud > Kaydinta & kaabta > shid kaabta iCloud> OK > Back ilaa Hadda .
Talaabada 3: qortaa erayga sirta ah ee ID Apple aad. Riix Back Up Hadda .
Talaabada 4: Sug ilaa habka gurmad u dhammeeyey. Xaqiiji waqtiga saxda ah ee aad ka dhigay gurmad ah.
Talaabada 5: On aad iPhone cusub 6 (Plus), raac fariimaha ku-screen dhammayn Mudanayaasha. Waa in aad ka dooro mid ka mid ah luqadda iyo dalka, iyo in uu doorto in si ay awood Services Location ama aan. Ha iloobin in aad doorato network Wi-Fi.
Talaabada 6: Marka gaaray shaashadda oranaya taagay iPhone , waxaa idinku waajib ah inay hesho Soo Celinta ka kaabta iCloud dooro file ku raad raac ah oo aad telefoonka jir. Xusuusnow ID Apple iyo password in aad kaliya hadda loo isticmaalo.
Tallaabo 7: Marka aad dhamaysato habka soo celinta, aad iPhone cusub 6 (Plus) bilaabi doonaa.
(The kuwa iibsaday) (The kuwa iibsaday)
(Oo keliya ayaa ku giringiriya Camera) (Oo keliya ayaa ku giringiriya Camera)
Just shaqada 10-daqiiqo
Bedelka Android ama Nokia Symbian si iPhone 6 (Plus)
Waraaqda gurmad Lugood si iPhone 6 (Plus)
Bedelka aan dawliga ahayn iibsaday audio iyo iibsaday iyo video
Goob qalab Copy, xogta app, mail cod muuqaal ah, ku iibsaday buugaagta, iwm
Chine ee kaabta, xogta app, bandhigyada TV, buugaagta, goobaha qalab, screen guriga, iwm
Waqti aad u badan Qaado
Ma wareejiyo Library Photo &-non iibsaday music, filimada, iwm
Kharash badan oo waqti ay gurmad iyo soo celiyo
Best 15 iPhone iyo iPad Apps ee macruufka 9/8
Kabsado Messages on iPhone
3 Siyaabaha kaabta iPod xiriiri ay Gordhaw Kadhoofaan 9/8 Hagaaji
Sida loo dardar Your Device ka dib macruufka 9/8 Update
Bedelka Content ka Android inay iPhone 6 (Plus)
Casharrada u iPhone Lock / Power Button Repair
> Resource > iPhone > 3 Hababka si ay u gudbiyaan Xogta laga Old iPhone si iPhone 6 / iPhone 6 Plus